Otu esi eji ndebiri PowerPoint na Google Drive | Nzukọ mkpanaka
Otu esi eji ndebiri PowerPoint na Google Drive
PowerPoint bụ otu n'ime ngwa ama ama ama n'ụwa, ejiri ya na ngalaba agụmakwụkwọ, yana na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ. N'edemede ndị gara aga, anyị ekwuola maka ụdị ndebiri dị iche iche anyị nwere ike iji, dị ka ndebiri maka agụmakwụkwọ. Enwere ike iji ọtụtụ ndebiri PowerPoint ahụ na Google Drive, na Google Slides, nhọrọ ụlọ ọrụ ahụ na ngwanrọ ngosi Microsoft.
Ọtụtụ ndị ọrụ anaghị eji PowerPoint na kọmputa ha, kama na -ahọrọ iji Google Slides. Ọ bụ ya mere ha ji achọ ụzọ ha ga -esi mee ya Enwere ike iji ndebiri PowerPoint na Drive, nke bụ ebe anyị na -ahụ Google Slides. Na ihu ọma, ọtụtụ ndebiri ndị ahụ dakọtara, yabụ na anyị agaghị enwe nsogbu na iji ha.
Tupu ịmalite iji ndebiri PowerPoint na Drive anyị ga -enyocha ma ọ bụrụ na ha dakọtara. Ọtụtụ n'ime ha bụ, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịdabere n'ụdị mmemme ha nwere. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ọ bụ ndebiri ochie, ụfọdụ nsogbu ndakọrịta nwere ike ibilite na nke a. Mana ihe dị mma bụ na ndebiri nke ibudatara ga -adabara na Google Slides, azịza Google na PowerPoint Microsoft.
1 Ihe ngosi Google (Ihe mmịfe Google)
2 Bubata ndebiri PowerPoint na Drive
3 Bubata isiokwu na nzụlite PowerPoint
Ihe ngosi Google (Ihe mmịfe Google)
Dị ka anyị kwurula, Enwere ike ịhụ ihe mmịfe Google dị ka azịza Google na PowerPoint Microsoft. Emebere mmemme a n'ime Google Drive, igwe ojii Google. Ọ bụ mmemme nwere ike inye aka nke ukwuu mgbe ị na -emepụta ihe ngosi mmịfe. Otu igodo ya bụ na anyị nwere ike iji ya na ọtụtụ mmadụ n'otu oge, ya bụ, anyị nwere ike inye ọtụtụ mmadụ ohere ngosi yana na ọtụtụ mmadụ na -edezi ihe ngosi ahụ n'otu oge.
N'ihi nke a, onye ọ bụla so na mbipụta a kwuru ị nwere ike ime ya na anya, ọ gaghị adị mkpa ịnọ n'otu oghere. Nke a bụ ihe dị ezigbo mma, na mgbakwunye na ịmegharị n'ụzọ zuru oke na ọtụtụ gburugburu, yana na ọrịa na -efe efe, onye ọ bụla nọ n'ụlọ, dịka ọmụmaatụ. Ihe mmịfe Google na -arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ na PowerPoint, n'agbanyeghị na mgbe ị na -eke na na -edezi ihe ngosi a, ị ga -enwerịrị njikọ ịntanetị n'oge niile, nke a bụ otu n'ime ọdịiche dị na ya.
Na Google Slides (nke a maara dị ka ngosi Google na Spanish) anyị na -ahụ ọtụtụ atụmatụ dị mgbe ị na -eke ihe ngosi. Ọ bụ ezie na nhọrọ nwere oke maka ndị ọrụ, ọ bụ ya mere ha ji achọ ndebiri ndị ọzọ n'ọtụtụ ọnọdụ. Ọ ga -ekwe omume ibubata ndebiri PowerPoint n'ime Drive, ka anyị nwee ike dezie ya na Google Slides mgbe ọ bụla anyị chọrọ. Nke a bụ usoro ọtụtụ na -achọ ịma ka esi eme ma nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị ihe dị mgbagwoju anya.
Bubata ndebiri PowerPoint na Drive
Ọ bụrụ na ibudatara ndebiri PowerPoint na PC gị ị chọrọ idezi ya na Drive, maka na ọ bụ ọrụ ị ga -eso ndị ọzọ rụọ, yabụ anyị ga -ebubata ya. Ụkpụrụ ahụ nke ibudatara ga -adị n'ụdị PowerPoint nke Microsoft, ya bụ, ọ ga -abụ faịlụ .pptx. Ihe mmịfe Google (Ihe ngosi Google) na -akwado usoro a, yabụ ị nwere ike mepee ma dezie ngosi a na -ajụ na slide na kọmputa gị.
Usoro a agaghị ewe anyị ogologo oge, yabụ onye ọrụ ọ bụla ga -enwe ike ịme ya. Dịka anyị kwuru na mbụ, ị ga -achọ nwee njikọ Ịntanetị n'oge ọ bụla iji bubata ndebiri PowerPoint ndị a n'ime Drive. Yabụ na ọ dị mma na mbụ buru ụzọ hụ na ị nwere ụdị njikọ Ịntanetị ma ọ bụrụ otu a, mgbe ahụ anyị nwere ike bido na usoro a na -ekwu.
Enwere usoro nke anyị ga -eso na nke a bubata ndebiri PowerPoint Microsoft ndị ahụ na Google Drive. N'ezie, ị ga -enwerịrị ndebiri na PC gị nke ị ga -enwe ike ibubata na akaụntụ gị. Ma ọ bụ nke ị mepụtara na mmemme ahụ n'onwe ya ma ọ bụ ọ bụrụ na ibudatara otu n'ịntanetị. Ozugbo ị nwere otu, ọ ga -ekwe omume ịmalite usoro a ugbu a.
Mepee Google Drive na PC gị, nke a ga -ekwe omume ozugbo na njikọ a.
Ọ bụrụ na ịbanyeghị na akaụntụ Google gị, biko mee ya.
Pịa na Unit m n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ahụ.
Pịa Ọhụrụ na elu ihuenyo ahụ.
Họrọ Google Slides site na listi na -egosi na enyo (Google Slides na Bekee).
Họrọ nhọrọ ngosi nke oghere.
Ihe ngosi ga -emepezi n'ihuenyo.
Gaa na nchịkọta nhọrọ dị na ihuenyo.
Pịa na Njikwa.
Gaa na nhọrọ mbubata mbubata wee pịa ya.
Na mpio nke mepere na ihuenyo PC gị, pịa bulite (dị n'akụkụ aka nri).
Pịa na bọtịnụ na -acha anụnụ anụnụ «Họrọ faịlụ site na ngwaọrụ gị».
Chọọ PC gị maka ebe ndebiri PowerPoint ma ọ bụ ndebiri ị ga -ebugo na Drive.
Họrọ faịlụ ahụ.
Chere ka ngosi bulite.
N'ime sekọnd ole na ole ngosi ahụ ga -emepe na Google Slides.
Gaba n'ihu idezi ngosi a.
Nzọụkwụ ndị a na -enye gị ohere ịnwe ụdị ndebiri PowerPoint ndị a nke ị nwere na kọmpụta gị ugbua na Drive, ka ị nwee ike dezie ha na ngosi Google. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga n'ihu na ndị ọzọ dezie ha, naanị ihe ị ga -eme bụ ịkpọ ha, ka unu niile wee nwee ike ime mgbanwe na ya. A ga -echekwa mgbanwe ndị emere na akpaghị aka na ngosi a nke ị nwere ike ibudata ma ọ bụ gosipụta ozugbo na slide mgbe oge ngosi ahụ ruru.
Ọ bụrụ n’ọdịnihu ị nwere ndebiri PowerPoint ndị ọzọ ịchọrọ iji na Drive, ị ga -eso naanị otu usoro ahụ iji mepụta mbubata ya. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ịchọrọ, ihe ngosi Google na -enye gị ohere ibubata ọtụtụ ndebiri n'otu oge, ka ị nwee ike bulite ọtụtụ ndebiri nke ị nwere mmasị inwe n'otu ọrụ. N'ụzọ dị otú a, ị ga -enwe ọbá akwụkwọ dị mma nke ndebiri nke ị nwere ike iji mee ihe ngosi nke ị ga -akwado n'ọdịnihu.
Bubata isiokwu na nzụlite PowerPoint
Ihe mmịfe Google abụghị naanị na -enye anyị ohere ibubata ndebiri PowerPoint n'ime Drive, mana anyị nwere nhọrọ ndị ọzọ. Ebe ọ nwekwara ike ibubata isiokwu na nzụlite na mmemme a. Ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, na Microsoft PowerPoint anyị nwere isiokwu na nzụlite anyị nwere mmasị na nke anyị ga -achọ iji na nchịkọta akụkọ ngosi Google, ọ ga -ekwe omume ime ya. Ọ bụ nhọrọ ọzọ dị mma ịtụle yana ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike ichigharị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Na PowerPoint anyị nwere nnukwu nhọrọ nke isiokwu ọkachamara na nzụlite, bụ́ nke pụrụ inye aka nke ọma n'ihe ngosi anyị. Na mgbakwunye, anyị nwekwara ike ibudata isiokwu ma ọ bụ nzụlite n'ịntanetị, nke anyị mechara chọọ iji mee ihe ngosi. Ọ nwere ike dịrị anyị mfe iji Ihe ngosi Google (Google Slides) mgbe anyị na -akwadebe ihe ngosi a, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ bụ ọrụ anyị na otu ndị mmadụ na -eme n'ime ime. N'ịbụ ndị chere ọnọdụ a ihu, a na -enye anyị ohere ibubata isiokwu ma ọ bụ ego ndị a, ka anyị nwee ike iji ha mee ihe ngosi a. Usoro anyị ga -agbaso n'okwu a bụ ihe ndị a:
Mepee Google Drive.
Banye na akaụntụ gị, ọ bụrụ na ịnweghị mmalite ma ọ bụ mepere emepe.
Mepee ngosi ọ bụla ị na -arụ ọrụ nke ị nwere na akaụntụ igwe ojii gị.
Gaa na nchịkọta nhọrọ dị n'elu ngosi.
Pịa na Okwu.
Nchịkọta nhọrọ nwere nhọrọ na -egosi n'otu akụkụ ihuenyo ahụ.
Pịa na nhọrọ mbubata mbubata, nke dị na ala nke menu ahụ na enyo.
Họrọ isiokwu ịchọrọ ibubata n'ime Drive.
Pịa na bọtịnụ isi mbubata acha anụnụ anụnụ.
Chere ka isiokwu a pụta na ngosi gị.
Oge ọ bụla enwere isiokwu anyị chọrọ iji mee ihe ngosi na Google Slides, anyị nwere ike bulite ya n'ụzọ a. Nke a metụtara ma isiokwu ndị ahụ anyị ebudatara na ntanetị, na ibe gbasara isiokwu na ndebiri PowerPoint, yana maka isiokwu ndị metụtara PowerPoint na nke anyị chekwara na PC. Yabụ na anyị ga -agbasa nhọrọ nke isiokwu anyị nwere ike iji na Google Slides na akaụntụ anyị wee mepụta ngosi ka mma n'ụzọ dị mfe.
Dịka na ngalaba nke gara aga, mgbe anyị webatara ndebiri PowerPoint n'ime Drive, a na -eme ya kwesịrị inwe njikọ ịntanetị ime usoro a nke mbubata isiokwu ma ọ bụ nzụlite. Ozugbo ebugoro isiokwu ahụ na ngosi gị, ị nwere ike họrọ mgbe na otu esi eji ya na ngosi ahụ ị na -arụ ọrụ ugbu a. Ọ bụrụ n ’ọdịnihu ịchọrọ ihichapụ isiokwu ndị i bugoro na Drive, ọ ga -ekwe omume, yana ihichapụ ndebiri ndị i bugoro na nke ị chọghịzi iji. N'ụzọ dị otú a, ị ga -enwe ike ịtọhapụ ohere na akaụntụ gị n'elu ikpo okwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Autlọ ọrụ akpaaka » Otu esi eji ndebiri PowerPoint na Google Drive
Ebe ị ga -ebudata ndebiri PowerPoint animated n'efu
Ebe ị ga -ebudata ndebiri PowerPoint 100+ n'efu